Culture Aangan Homestays in Rural Rajasthan
India Rural Tourism in Rajasthan: Culture Aangan Homestays
01 ye 09
Nhoroondo yeChirongwa Aangan Homestays
Outlook kubva kumusha weCulture Aangan muPadampura, Rajasthan. Rakhee Ghelani
Kunyange zvazvo Rajasthan inonyatsozivikanwa nokuda kwezvikwata zvayo uye nzvimbo, chii chiri kuwanikwa iye zvino ndicho chakanaka chekushanyirwa kwekumaruwa muIndia pamwe chete. Kunyange zvazvo vatashanyi vanowanzoshanyira zviitiko zvakawanda mumaguta eIndia, mwoyo chaiwo weIndia ndiyo misha yaro, apo tsika yekare uye mararamiro ehupenyu anoenderera mberi asingashanduki nhasi. Asi, kusvikira munguva pfupi yapfuura, misha yakanga isingabviri kune vakwegura vakawanda nekuda kwekutaura kwemutauro uye kusawana kwekugara.
Kukosha Kwokutengesera Kwemahombekombe muIndia
Shandisa nguva mumisha yeIndia uye uchaona kuti vari kutarisana nenyaya dzinokura. Rimwe rematambudziko makuru nderokuti vanhu vakawanda vari kubva kumisha vachifarira maguta makuru, uko kune mikana yakawanda. Mune misha yakawanda, yakadai seyaRajasthan, vanhu vari kusiya basa ravo raiwanzoita. Sezvo hupfumi hwekumaruwa huzhinji hunotarisana nekurima, izvi zvinoita kuti zvive zvakaoma kuwana vashandi.
Vamwe vagari vomuRajasthan vanotarisana nedzimwe dambudziko, zvikuru avo avo vakagara vachivimba nenyoka dzinonakidza (ikozvino dzakarambidzwa nehurumende ) sechinhu chaicho chekuwana mari. Pasina rubatsiro rwekutsvaga basa risina basa, chokwadi chinosuruvarisa ndechekuti vakave vatorwa, vanofamba vachibva kumusha nemusha uye vachivimba nekukumbira kuti vararame.
Kuvandudzwa kwemisha semakwikwi ekushanyirwa kunopa zvimwe zvekuwana mari kune vagari vemahara, kana kuburikidza nekushanda kwemisha yekushanda kana mabasa ekushanyira kumaruwa (somuenzaniso, kushanyira kwemusha uye kutengeswa kwezvinhu).
Rural Development Work of Culture Aangan muRasasthan
Tsika Aangan isangano reku Mumbai rakagara riri kupayona kumaruwa ekumaruwa muIndia. Chimwe chezvavanonyanya kutarisa chave chiri mukuvandudza vagari vomunharaunda munharaunda ye Pali Pali Rajasthan. Vashanyi vanogara nemhuri uye vanoziva tsika yemunharaunda. Izvi zvinovabvumira kuti vazive India nevanhu vayo zvakanyanya, kuti vanzwisise mararamiro emhuri, vadzidze kuti musha unoshanda sei, uye kuti vaone kukumbiro kwehupenyu hwemusha. Vanhu vari nyore, pasi pasi, uye kugamuchirwa.
Zvichienderana nevakakokwa, kune zvitatu zvekugara kwemisha kusarudza kubva.
1. Varimi Vekugara Kwemusha: Ndakagara paChirungu Aangan pamba yeimba yekugara muPadampura. Une dzimba yekwaRajput yemunharaunda (vatongi venharaunda yacho), yakakombererwa neminda uye yave ichangovakwa kunyanya kune vaenzi. Makamuri ane zvivako zvemazuva ano zvekumadokero uye maitiro anoyevedza panguva ino, akafuridzirwa nenharaunda. Mhepo itsva uye runyararo zviri muzhinji. (Uye saka zvakave zvakagadziridzwa zvakare nefivha, iyo yaiva inofadza kushamisika). Musha wemhuri unotungamirirwa nemwanakomana wedangwe wemhuri, uyo anonyanya kutasva mabhiza uye anoita safaris yebhiza.
2. Musha Wemudzimai: Chiitiko chaAangan chekugara mumusha weNana chinopfurikidza ne regal nhaka. Iyo inowanikwa nevana veMewar mhuri yeumambo kubva kuUdaipur , iyo yakakosha yeal (mansion) yakavakwa kwemazana emakore. Makamuri ekushanyira anofadza, ane mabhandi ega, uye imwe yepamusoro yepamusoro ine yega padzimba.
2. Musha wekuvakidzana: Kune avo vanoda kuva pedyo nechisimba, Culture Aangan ane imba yekugara nemudzimai uye vana vavo vaduku mumusha weGulthani. Iyi misha ine misha ine migwagwa yakamanikana uye masvingo akare.
Mukubatana nevanogara, Culture Aangan inopa mabasa akawanda sechikamu chepatakiti dzavo. Zvisarudzo zvakawanda uye zvakasiyana-siyana, uye zvinosanganisira ingwe yechirungu, kutasva mabhiza, kupedza nguva nevanhu vemunharaunda uye madzinza emunharaunda, vachitsvaga misika nemasvingo, kushanyira mhizha dzekugara uye kudzidza ruzivo rwavo, uye manheru emitambo yemitambo.
Tsvaga zvakawanda pamusoro peChipatimendi cheChirongwa Aangan pa webhusaiti yavo, kana kuti verenga kuti uone zvishomanana zvezviitiko zvandakaita apo.
Musangano wemangwanani wevafudzi muRajasthan musha. Rakhee Ghelani
Mangwanani oga oga, vafudzi vemo vanobva kumusha vachienda kumusha mumusha kuti vawane tea, fodya, uye opium kuti vazvisimbise kwezuva rose rakapedzerwa mumamiriro ezvinhu akaoma achifudza mhuka dzavo.
Kuenda kumusha wekumusha opium musangano waiva chikamu chinonakidza cherwendo rwangu. Izvo zvakandibatsirawo kuti ndidzidze nezvemarudzi akasiyana-siyana emisha. Iti tsvuku tsvuku dzakapfekedzwa nevarume ava zvinoratidza kuti ndeyvenhengo yemufudzi wefudzi inonzi Raika. Zvindori zvazvo zvinonzi mathi , uye mabhesi ane muromo wejirasi pamusuo, vachivaratidza sevafudziwo. Apo vafudzi vari kure, madzimai avo anoshongedza dhotis avo nemapuranga akaitwa nemakamera emakamera.
Zvose zvinokonzera tsvina dzakasiyana uye zvishongo. Chimwe chivara chakachena chichena chinomiridzira murimi. Rajputs (chirevo chinotonga) chinopfeka mabhuru mashanu mavara, uye safoni panguva yekuroorana.
Kusiyana neRajput yangu, avo vana vavo vangave vasati varoora kusvikira vasvika makore makumi maviri, kusvika makore mashoma akapfuura vana vakaroorana vaigara vari mumharaunda yeRaika. Kunyanya kushamisa, vana vakaroorana pavakanga vachiri vaduku semwedzi mitatu. Sezvo vakanga vasingakwanisi kufamba-famba mumoto kanomwe (zvinotarisirwa mumutambo wemuchato wechiHindu), ivo vaiita sekutakurwa vakatenderera mundiro!
Vakadzi veRudzi rweBhat. Sharell Cook
Vakadzi ava nhengo dzenyika yeBath inotenderera, iyo inonyanya basa iri kutengeswa kwezvipfuwo. Panzvimbo yekuchengeta mari yavo mubhangi, vanoiisa mugoridhe nesirivha zvishongo. Hungu, ndaiva nehomwe huru yezvishongo. Yaiva yakanaka!
Camel Carishma Camel Welfare
Kupinda kwaKamel Carishma NGO. Rakhee Ghelani.
Kana iwe unofarira Rajasthan yemhuka yakashata yemutoro, kamera, ipapo Camel Carishma NGO ndiyo nzvimbo yekushanyira. Iyi NGO yakasimudzwa kuti ichengetedze hurumende yevanhu inowedzera kupera nekupa varimi vemakamera vane mari yekupfuurira kuchengeta makamera. Chinangwa chekugadzira uye kutengesa zvigadzirwa zvemamiriro okunze zvakabva kumakamera. Izvi zvigadzirwa, izvo zvinogadzirwa navanhu vemo uye zvinowanikwa kutenga kune NGO, zvinosanganisira sipo yemukamera yemakamera, mabhuku anogadzirwa kubva pamapepa emamera emakamera, uye makumbo akavezwa makamera, mabhegi, uye stoles.
Mamwe mashoko anowanika pane websaiti yeKamel Carishma.
Sirivha Temberi Masuo
Sirivha mutemberi. Rakhee Ghelani.
Iwe unogona kunge wakamboona sirivha yakaremara yakavharwa magonhi nemagadzirirwo akaoma paatemberi muIndia. Zvino, ona kuti vakagadziriswa sei pamusangano pedyo neguta reGulthani. Inguva inopedza basa iyo inotora mwedzi kuti ipedze.
Terracotta Horse Temple
Nzira dzeTerotota mabhiza patemberi. Rakhee Ghelani.
Kune temberi mumusha weHarji, muruwa rwePajar Rajasthan, uko mabhiza ezvitroti anonamatwa. Vanhu vanoita chishuvo patemberi, uye kana vakapiwa vanopa bhiza retracotta kwairi. Row pamutsara wemabhiza aya, mumhando dzose uye mazamu, zadza nzvimbo iri shure kwetemberi. Rimwe bhiza rinowanzobuda richikwira sepamusoro pedenga! Enda kune vashandi vemabhiza epaTracotta vari pedyo kuti udzidze kuti mabhiza anoitwa sei.
Ini, bhiza rinotarisana neimba yeimba. Rakhee Ghelani
Sezvo ndakakurira mumaruwa, ndakanakidzwa nekukwanisa kuenda manheru uye kutasva mabhiza ekutanga, mumisha uye nzvimbo dzakapoteredza denga. Muchengeti wangu aiva muridzi weMarwari matanhatu mabhiza emhando dzakanakisisa munzvimbo. Marwari bhiza isati isingazivikanwi yemabhiza anozivikanwa nokuda kwesimba uye kutsungirira kwayo (aya marudzi emabhiza ndiwo ayo anoshandiswa muhondo muIndia uye inomiririra madzimambo ane simba), uye nzeve dzinodzokera mukati mukati mazano. Zvinokwanisika kushanyira purazi yebhiza uye kuona kuti vakaberekwa sei.
Kukohwa mbeu yemasitadhi. Rakhee Ghelani
MunaFebruary, nzvimbo yekumaruwa inowanzova chifukidzo chemavara emujadi yemasitadhi. Pandakanga ndiripo muna March, yakanga iri nguva yekukohwa. Mazamu akaomeswa akanga ari kushandiswa nevashandi vomumusha kuti vabudise mbeu duku yemasitadhi iyo inowanzoshandiswa muIndia kubika.
Rarama bhajans uye kutamba, kuitwa nevanhu vomunharaunda. Rakhee Ghelani.
Purogiramu yemagariro emadekwana yaiva nehutano hwebhiza yemuchato wekudanana, yakarongedzwa zvine mavara uye kazhinji inotasirwa nemuwani pamabiro emumusha. Bhiza rinotama kune kurohwa kwematoro.
Mukuwedzera, boka revanhu vomunharaunda rakasvika kuzoimba bhajans live (nziyo dzokunamata dzechiHindu). Vamwe vavo vakatamba. Mutori wacho zvakare akaratidza tarenda isingaenzaniswi yekurova, iyo yaiva yekushambadzira kweusiku. Unogona kuona vhidhiyo yangu yaro pano.
Misha yeIndia yakazara nepfuma isingatarisirwi!
Lakshman Sagar Review: Rural Luxury in Pali Rajasthan
Camel Safari muJaasalmer
7 Best Budget Hotels muPushkar yeKamera Yakanaka
The Ultimate Guide to Visit Rajasthan's Shekhawati Region
Montreal Postal Postal Codes
Shongwe Mumakore: A Photo Tour
Kudya paChiquillo Kiosks
10 Zvinhu Zvinofadza Kuita muConnecticut
Agonda Gungwa muGoa: Essential Travel Guide
Krisimasi 2017 pa Union Union muWashington, DC
Iyo 6 Mabhizha Akanakisisa Okushambadzira Kuongorora Iyi Ichando
The Veloway Bike Trail muAustin
RVing muDyy Point Point Mexico
Seattle Kuroorana Chirevo Mazano uye Mazano
Kufamba, Biking & Rollerblading paStanw Park yaWewall
Nhoroondo yeMalacca Yakaitika Parizvino
Mabasa eIsita muAlbuquerque
San Francisco Zviratidzo - Zvakanakisisa zveZororo